Yebo, sidinga wonke ama-oda ngamazwe ukuba kuyingxoxo eqhubekayo ubuncane oda ubuningi. Uma ufuna ukuba lithengise kodwa izinto eziningi ezincane kakhulu, sincoma ukuthi ukwandisa ubukhulu bakho ukufinyelela intengo wethu omkhulu.
Isikhathi ukuhola imayelana nezinsuku ezingu-7 khulula ngoba icala kuphela bakhokhise izindleko yizimpahla.
Isikhathi ukuhola kuyinto emva kwezinsuku 20-30 ukuthola inkokhelo idiphozi. Izikhathi phambili lizoba ngempumelelo uma (1) sesamukele imali yakho, futhi (2) siyamukeleka sakho sokugcina imikhiqizo yakho. Uma izikhathi zethu phambili azisebenzi umnqamulajuqu akho, sicela uye phezu nezidingo zakho nge ukudayiswa yakho. Kuzo zonke izimo sizozama ukuze ifanelane nezidingo zakho. Ezimweni eziningi esikwazi ukwenza kanjalo.
Ungenza inkokhelo ne-akhawunti yethu yasebhange, T / T, L / C:
Thina yesiqinisekiso zindawo zokusesha ezethusayo yethu KANYE semfenisha for 5-Iminyaka Ngaphandle operation womuntu okungafanele.
Ukuzibophezela kwethu ukwaneliseka kwakho imikhiqizo yethu. Ngo incwadi egunyazayo noma kungenjalo, isiko inkampani yethu ikheli futhi uxazulule zonke izinkinga zamakhasimende baneliseke wonke umuntu
Ngingabenza kanjani ukufaka Racks?
Thina ahlinzeke ezinemininingwane ukufaka imfundo esazo zonke eshalofini. Uma kudingeka, futhi sinikeza onjiniyela amavidiyo mahhala.
Ngingabakha kanjani ubuhlobo kwikhotheshini esheshayo?
(1) Ubukhulu ishede?
(2) Pallet yokubeka ubukhulu: Ukuphakama * Ukujula * Ubude?
(3) izingqimba Zingaki?
(4) Iyalayisha umthamo ngamunye level? (Uma kunokwenzeka, ungakwazi yini ngomusa ungitshele ukuthi izimpahla zakho?)
(5) I ase umbala?
(6) Bangaki amatheku (amasethi)?
Warehouse ka-Pallet Rack , foldable Wire Mesh Isitsha , Warehouse ka-Storage Racks , Pallet zindawo zokusesha ezethusayo zizivikele , Pallet zindawo zokusesha ezethusayo uprights , Warehouse ka-Pallet zindawo zokusesha ezethusayo System ,